Sharif Xasan, Guleed & Kheyre oo rafasho ugu jira sidii Xasan Kheyre uga qeyb geli lahaa shirka berri - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Sharif Xasan, Guleed & Kheyre oo rafasho ugu jira sidii Xasan Kheyre...
Sharif Xasan, Guleed & Kheyre oo rafasho ugu jira sidii Xasan Kheyre uga qeyb geli lahaa shirka berri
Waxa hada si wadajira u galay guriga Xasan Shiikh, dadka kala ah; Sharif Xassan, C/Karin Guled & Kheyre kuwaas oo doonaya in lagu qasbo Madasha Xisbiyada Qaran in shirka beri furmaya lagu daro Xasan Kheyre.
Sharif Xasan oo heshiis gaar ah la soo galay Xasan Kheyre ayaa ay ka go’an tahay in uu xaqiijiyo in Xasan Kheyre uu ka mid noqdo Madashada Musharaxiinta, isla markanaa isaga oo loo doorto in uu hogaamiyo Madasha Cusub.
Ma aha markii u horeeysay ee uu Sharif Xasan iibasado saaxiibadiisa isaga oo fiirsanaya danahiisa gaarka ah. Sida MOL ay u xaqiijiyeen ilo kala duwan Sharif Xasan ayaa dhaqaale aan la sheegin inta uu la eg’yahay ka qaatay Xasan Kheyre.
Waxa aan la ogaynin in madaxda Madashada Xisbiyada Qaran ay ogolaan doonaan in Xasan Cali Kheyre oo hogaaminyayay dhibaatooyinkii la gaarsiiyay shacabka Soomaaliyeed qayb ka noqdo kulanka Madashada Musharaxiinta ee lagu wado in beri uu ka furmo magalaada Muqadisho.
Su’aashu la isweydiinayo waxa ay tahay Sharif Xasan ma ku guuleysan doonaa in uu god dheer uga soo haro Musharixiinta Madaxweynaha, oo intooda badan ka soo jeedo hal jufo. Waxaa shaki laga qabaa xiriirka ka dhexeeya Sharif Xasan, Xasan Kheyre & Fahad Yasin oo dhammaantood raba in aay fashiliyaan Musharaxiinta Madaxweynaha oo hal beel ka soo wadajeeda, taasoo seddexda nin aay ka mideysan yihiin in aanay siyaasadda dib ugu soo noqon.